Google က သူ့ရဲ့ Smartwatch ကို ထုတ်ဖော်ပြသတော့မလား? ~ The ICT.com.mm Blog
Google က သူ့ရဲ့ Smartwatch ကို ထုတ်ဖော်ပြသတော့မလား?
Google က Smartwatch ဈေးကွက်ကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တော့မယ့် ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိင်ပါတယ်။ Google က သူ့ရဲ့ Smartwatch ကို ပြုလုပ်ပြီးစီးပြီ လို့ 9to5Google ၀က်ဆိုက်က တနင်္လာနေ့က ပြောကြားပါတယ်။ 9to5Google ၀က်ဆိုက်ပြောကြားချက်အတိုင်းသာမှန်မယ်ဆိုရင် Google Now application က နာရီရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းကပါ၀င်လာမှာဖြစ်ပြီး Android Smartphone နဲ့ Smartwatch ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရလာမှာပါ။
Google Now က သင့် ရဲ့ Virtual Personal Assistant တစ်ယောက်လို အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး သင့် မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးမှာပါ။ သင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း အလိုလို ပြောပြပေးနေမှာပါ။ သင့် Smartphone က Emails, Appointments, Directions နဲ့ တစ်ခြား ဒေတာတွေကို Smartwatch ကနေရယူအသုံးပြုနိင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Smartwatch မှာ Battery သက်တမ်းကြာရှည်အသုံးခံနိုင်ဖို့နဲ့ Bluetooth 4.0 ကို Support ပေးဖို့လည်း Google ကကြိုးစားနေပါတယ် လို့ 9to5Google ကထပ်ပြောကြားပါတယ်။
Android Police ရဲ့ Writer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Artem Russakovskii ကလည်း Google က အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်နေ ့မှာ Code Name Gem လို့အမည်ရတဲ့ Nexus Watch ကို ကြေညာမယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
On Device Research နဲ့ CCS Insight တို့ရဲ့သုတေသန စစ်တမ်းအရ Smartwatch တွေကို လူတွေကသိရှိအသုံးပြုမှု နည်းပါးနေချိန်မှာ Google က အဲဒီ ဈေးကွက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး လူတွေအသုံးပြုမှုများလာစေမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မေးစရာရှိလာပါတယ်။ စစ်တမ်းတွေ အရ Smartwatch အသုံးပြုသူတွေ ရဲ့ လေးဆယ် ရာခိုင်နှုန်းက Smartwatch တွေအသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနာရီတွေအသုံးပြုဖို့မေ့လျော့ နေတာရယ် သိပ်ပြီးထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ နည်းပညာတွေ မပါရှိသေးတာရယ်ကြောင့်လို့ စစ်တမ်းကဖော်ပြပါတယ်။
မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ Smartwatches တွေဟာ Smartphones တွေ နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြု ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုသူတွေ အပေါ်တစ်ချိန်တည်းမှာ အလုပ်နှစ်ခုလုပ်ခိုင်းသလို ဖြစ်စေပြီး Devices နှစ်ခုကြားမှာအလုပ်ရှုပ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့ Smartwatch ကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာပါလို့ 9to5Google ကပြောပါတယ်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုက Sony CEO Kazuo Hirai က လူတွေက ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ နာရီမျိုးကို အလိုရှိသလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး Smartwatch Technology က ကန့်သတ်ချက် တွေရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
Google မှာ ဈေးကွက်အသစ်တွေကို အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းကအပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google ရဲ့ Smartwatch သတင်းသာမှန်ခဲ့ရင် တစ်ခြား Company တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူတွေစိတ်၀င်စားမှုနည်းပါးတဲ့ Smartwatch ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Older Wi-Fi လိုင်းကောင်းမွန်စွာမိစေနိုင်မယ့်နည်းများ။